waqti Post: Mar-23-2019
2019 COMSPROF Bologna si rasmi ah dhammaaday, oo aan ka qeyb gali doona bandhigyo kale oo qurux xirfadeed ee qeybtii labaad ee sanadka. fadlan fiiro gaar ah u website our news marka aad timaado. Read more »
Waxaan xaadiri doono cosmoprof ee Bologna show In bandhig March 2019.Our waa Hall 34 G21.If aad rabto inaad aragto shay-baarka our, ama aad rabto inaad iibsato waxyaabaha our. Ku soo dhawoow in our waab tagaan. Waxaan sugayaa inaad soo socda. Read more »
waqti Post: Aug-22-2018
21 Asian xayawaanka show ayaa guul ah kusoo gabagabeeyay. haddii aad xiisaynayso in waxyaabaha our, fadlan kaalay oo na waqtiga soo socda waab. Our inta badan soo saari clipper timaha xayawaanka, Furimaha Dagaalka ciddiyaha xayawaanka iyo qallajiye timaha xayawaanka. Read more »